About Us - Green Sakafo Pack Co., Ltd.
Double rindrina kapoaka
Plastic mofo bag
Cake Label taratasy mandraikitena
Coffee Cup sarony
Greenfoodpack Co. dia matihanina sinoa mpanamboatra ny famonosana entana ho an'ny mpivaro-mofo, trano fandraisam-bahiny, toeram-pivarotana sy ny toy izany koa vatomamy manokana fivarotana. Ny tenantsika isika amin'ny fanatitra Pride maro samihafa ny Eco- namana vokatra izay tsy vitan'ny hoe tsara tarehy, fa mora ampiasaina.
Hanorina ny marika, namboarina ODM fanompoana tsy ampy toy ny isan-ny lasibatra tsena, ny fizahan-toetra malefaka mba MOQ ny amin'ny zavatra maro. Ary Greenfoodpack nanampy mpivaro-mofo, trano fandraisam-bahiny sy ny sakafo hafa ny fanompoana raharaham-barotra mba hanatratra sisiny ambony kokoa. Fa andro rehetra izany, ny andro tsy fiasana, amin'ny fotoana rehetra. Quality, famolavolana sy ny asa fanompoana nataony Greenfoodpack mialoha any an-tsaha.
Amin'ny maha-orinasa mpanjifa-mirona, Greenfoodpack miezaka amin'ny maha-mpitarika ao amin'ny fonosana orinasa. Isika natokana ny fahombiazanao amin'ny alalan'ny fanolorana ny vahaolana tsara indrindra sy ny fanomezana faran'izay tsara ny fonosana miaraka amin'ny fanoloran-tena mpanjifa.
Adiresy: Donghuan Industrial Park, Donghuan Road, Panyu District Guangzhou, Shina
Natonta Carrier Bags , Cake Pop Boxes , Kraft Paper Straws, Hot Cold Cups, Plastic mofo Bags , Paper Cup,